Manamafy Ny Fahefany Amin’ny Politikan’ny Aterineto Ny Filankevitra Faratampon’ny Serasera Ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2015 14:03 GMT
Tamin'ny 5 Septambra 2015, voatendry indray ho mpikambana ao amin'ny Filankevitra Faratampon'ny Serasera mandritra ny efa-taona ny Ayatollah Ali Khamenei. Sary avy amin'ny ICHRI.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ary navoaka eto indray noho ny fiarahamiasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Misahana ny Zon'Olombelona ao Iran.
Voafidy hamindra ny fahefana misahana ny politikan'ny aterineto ao amin'ny firenena ho any amin'ny Filankevitra Faratampon'ny Serasera ao amin'ny firenena ny Mpitarika faratampon'i Iran Ali Khamenei, hetsika hanamafisana orina ny fahefana manapa-kevitra amin'ny politikan'ny aterineto ho eo ambany fitantanan'ny sampana mpandala ny nentin-drazana indrindra ao amin'ny governemanta.
Teo aloha, nandray anjara tamin'ny famolavolana ny politikan'ny serasera ireo sampam-panjakana marobe, izay ahafahan'ireo foibem-pahefana isankarazany – anisan'izany ny fitantanam-panjakana tony fihetsika kokoa an'i Rouhani – hanana ny lanjany amin'ny fanapahan-kevitra manoloana ny aterineto.
Mety fambara ratsy ho an'ny zo nomerika ao Iran ny fanapahan-kevitra: Mitatitra mivantana any amin'i Khamenei ny Filan-kevitra tarihan'ny Filoha Rouhani. Ny ankamaroan'ny mpikambana ao dia notendren'ny Mpitarika Faratampony, izay nilaza ny fiheverany fa “ampiasain'ny fahavalo hamelezana ny fomba fisainana Islamika” ny aterineto. Misahana mivantana ny fanivanana ny aterineto ao Iran ny Filankevitra Faratampon'ny Serasera ary mamaritra izay tranonkala tokony hosakanana. Amin'izao fotoana izao, Iran no faharoa aorian'i Shina amin'ny isan'ny tranonkala nosakanany.
“Hanome alalana malalaka ireo sampam-piarovana ity fanapaha-kevitra ity hanakana izay tranonkala na hanenjika izay olona mitady hiala amin'ny lalana ofisialy,” hoy i Hadi Ghaemi, tale mpanatanteraky ny Hetsika Iraisampirenena misahana ny Zon'olombelona ao Iran.
Ny fanapahan-kevitra hanamafisana ny fahefana mamolavola ny politikan'ny aterineto ao amin'ny Filankevitra Faratampon'ny Serasera dia nitontona tao anatin'ny toe-draharaha mihamafana ifanenjanan'ireo mahery fihetsika mikasa hanidy mafy kokoa ny fidirana amin'ny aterineto, sy ireo tony fihetsika mandresy lahatra fa ilaina amin'ny varotra maoderina, fampianarana akademika, ary ny asa matihanina ny fidirana amin'ny aterineto.
Mpanitsakitsaka ny zon'olombelona ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra Faratampon'ny Serasera
Ahitana olona na notendren'i Khamenei mivantana na mpikambana ao amin'ny minisitera na fikambanam-panjakana lehibe ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra. Mahatonga ny mpitarika faratampony ho maro an'isa tsy voahozongozona ao amin'ny filankevitra ny fitambaran'isan'ny olona voatendrin'i Khamenei mivantana raha mifanohitra amin'ny mpikambana ao amin'ny governemanta nofinidim-bahoaka.
Tamin'ny taratasy fanendrena fanindroany tao amin'ny tranonkalan'i Khamenei, nanendry mpikambana telo vaovao ao amin'ny Filankevitra Faratampon'ny Serasera izy, Reza Taghipour sy Seyed Ezatollah Zarghami ny roa izay nosazian’ny Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Manala an'i Rouhani amin'ny Famolavolana ny Politikan'ny Aterineto
Hanaisotra tokoa ny fitondran'i Rouhani amin'ny famolavolana ny politikan'ny aterineto ny fiovana izay nampahafantarina tamin'ny alalan'ny fanambarana nivoaka tao amin'ny tranonkalan'i Khamenei tamin'ny 5 Septambra 2015.
Hatramin'ny naha-voafidy an'i Rouhani tamin'ny 2013, nandray anjara mavitrika tamin'ny fiezahana hampandroso ny fidirana aterineto tao Iran ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao sy ny Fifandraisana ary nampihemotra ireo mahery fihetsika ihany koa tamin'izany. Tamin'ny volana Jona 2014, tsy nety nampihatra ny baiko avy amin'ny Vondronasa Mamaritra Ireo Votoatin-Keloka Bevava , sampan-draharaham-panjakana iray hafa nandray anjara tamin'ny fanapahan-kevitra fanivanana aterineto ary miasa eo ambanin'ny fitantanan'ny Filankevitra Faratampony i Rouhani amin'ny tokony hanakanana ny tolotra fandefasan-kafatra WhatsApp.
Loharanom-pifandirana teo amin'ireo tony fihetsika sy ny mahery fihetsika izay nikiry hatrany amin'ny tokony hanakanana ireo habaka aterineto ahitana votoaty mety manafintohina ny fomba fiasan'ny firenena amin'ny fanivanana aterineto. Nilaza ny fitondran'i Rouhani fa ampy hanafoanana ny fitaovana mahery setra ny fomba fifantenana kokoa amin'ny “fanivanana marani-tsaina”, ka izay votoaty manafintohina ihany no akatona fa avela kosa ireo habaka aterineto hiasa toy ny mahazatra. Na dia eo aza ny olana ara-teknika mety asehon'izany, dia mampiseho fahaiza-milefitra amin'ny resaka votoaty antserasera noho ireo namany kaonservativa kokoa ny hevitr'i Rouhani.
Mety hiditra amin'ny famantaran-toerana ny rakitahiry ve ny fitondrana vaovao?
Tamin'ny 6 Septambra 2015, iray andro taorian'ny nandefasana ny taratasin'i Khamenei, nilaza tamin'ny Sampam-pahalalaham-baovao Fars ny mpampanoa lalàna lefitra misahana ny aterineto, Abdolsamad Khorramabadi hoe:
Ny tambajotra fandefasan-kafatra amin'ny finday vahiny toy ny WhatsApp, Viber sy ny Telegram … [dia manome] toerana ny fitsikilovana ankapobeny ataon'ny fanjakana vahiny eo amin'ny fifandraisan'ny olom-pirenena [ary] nivadika ho fandriana azo antoka ho an'ny fananiham–bohitra ara-kolontsaina sy ny fikambanan-jiolahy.
Nilaza i Khorramabadi fa tokony hakatona tanteraka ny tambajotra sosialy rehetra “mifandray … amin'ny fanjakana fahavalo sy ny sampam-pitsikilovan'ny vahiny”.
Nilaza ihany koa izy sy ireo manampahefana hafa fa ireo tambajotra sosialy izay manaiky hampiantrano ny lohamilin'izy ireo ao Iran ihany no tokony avela miasa. Hatreto dia tsy nisy orinasa iraisampirenena nanaiky izany soso-kevitra izany. Mety hitarika fandaniambola henjana hoan'ny orinasa ny fanapahan-kevitra tahaka izany, satria ny fametrahana lohamilina ao Iran dia ahafahan'ny manampahefam-panjakana miditra ao amin'ny votoaty miserana eo anoloan'izy ireo ary mety hampidi-doza amin'ny fiarovana sy ny fiainana manokan'ny mpiserasera.
Nilaza tamin'ny Fars ihany koa i Khorramabadi fa tokony hamafisina ny tambajotra sosialy ao Iran mba hifindran'ny mpiserasera ao amin'ny firenena ho ao anatin'izany. Nifantohan'ny ezaky ny fanjakana hanaraha-maso mangina ny votoaty antserasera sy hamantarana ary hitoriana ireo mpikatroka antserasera ny fanamaroana ireo tolotra sy fampiharana aterineto iraisampirenena amin'ireo voatra namboarin'ny governemanta izay manome fahefana miafina ny manampahefana hiditra ao anaty kaonty tsy ankiteniteny.
Mifanditra ihany koa ireo mahery fihetsika sy tony fihetsika amin'ny fanomezana fidirana aterineto haingam-pisosa. Nandritra ny taona maro, nataon'ny manampahefana miadam-pandeha ny aterineto mba tsy ho azo ampiasaina loatra, indrindra amin'ny fampiasana finday. Hita fa fandrosoana lehibe amin'ny fidirana aterineto amin'ny finday ny fanapahan-kevitr'i Rouhani hankatò ny fanomezana fahazoan-dàlana mampiasa tambajotra 3G sy 4G tamin'ny Aprily 2014. Na izany aza, nandà ny hanome ny maridrefy [onja] ilaina ho an'ny tolotra fidirana amin'ny 3G sy 4G manerana ny firenena, ka mametra ny fandrakofany, ny sampam-pampielezampeo sy sary an'ny fanjakana, ny Fampielezam-peo sy sarin'ny Repoblika Islamikan'i Iran (IRIB). Tendren'i Khamenei ny filohan'ny IRIB ary mitatitra mivantana any aminy ny asany nataony sy ny zavamisy .
Efatra no voasambotra noho ny fandefasana lahatsoratra “manevateva” tao amin'ny aterineto
Nandritra izany fotoana izany, mitohy tsy misy fitsaharana ny fanenjehan'ny manampahefana ny mpampiasa aterineto. Tamin'ny 30 Aogositra 2015, nanao tatitra ny mpitondratenin'ny fitsarana Gholamhossein Mohseni-Ejei fa olona efatra no nogadraina noho ny fandefasana votoaty “manevateva” tao amin'ny aterineto, ny farany anaty lisitra lavabe izao dia ny fisamborana sy fitoriana ireo matihanin'ny aterineto sy mpiseraseran'ny media sosialy.
Ankoatra izany, nilaza tamin'ny Sampam-pahalalam-baovao ofisialy Iraniana (ISNA) ny komandin'ny polisy ao Tehran, Hossein Sajedinia tamin'ny 6 Septambra 2016 fa tao anatin'ny dimy volana mahery, trano fidirana aterineto 272 no nakaton'ny polisin-tsibera Fata ao Iran ary 847 hafa nahazo fampitandremana.
“Mihevitra i Khamenei fa raha afaka mifehy hatrany ny aterineto izy dia afaka mifehy ny olom-pirenena. Saingy raha mihoatra ny atsasaky ny mponina maherin'ny 80 tapitrisa no ao amin'ny serasera, dia efa nandao ny gara ny lamasinina.” Hoy i Ghaemi.